Soo kabashada Lost E-mailada Muuqaalka iyo Alaabada ay ugu wacan tahay Isku-darka taleefanka gacanta
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Soo kabashada Lost E-mailada Muuqaalka iyo Alaabada ay ugu wacan tahay Isku-darka taleefanka gacanta
Soo kabashada Lost E-mayllada Muuqaalka iyo Alaabada ay ugu wacan tahay Isku-darka taleefanka gacanta!
Markaad iskudhafanto taleefankaaga gacanta iyo Muuqaalka muuqaalkaaga dusha kombuyuutarka, oo ay ku jiraan softiweer ay kamid yihiin ActiveSync ama Windows Mobile Device Center, mararka qaar waxaad waayi doontaa emayllada qaarkood iyo waxyaabo kale. E-mayllada asalka ah iyo walxaha waa laga tirtiray Muuqaalka dusha sare ee desktop-ka, laakiin kama muuqdaan taleefankaaga gacanta. Tani waxay dhacdaa sababaha soo socda awgood:
Khaladaadku waxay ku dhacaan geedi socodka iswaafajinta. Tusaale ahaan, cilad ku xirnaanta shabakadda awgeed, walxaha waa laga tirtiraa desktop-ka laakiin si habboon looguma wareejiyo taleefanka gacanta.
Ciladda barnaamijka is-waafajinta. Tusaale ahaan, ActiveSync waxay tirtiri kartaa xiriirada ku jira desktopka Muuqaalka laakiin uma wareejin karto moobaylkaaga.
Xaaladda noocaas ah, weli waad soo kaban kartaa lost emaylka iyo waxyaabaha la soo mariyo DataNumen Outlook Repair, sida soo socota:
Tag kombiyuutarkaaga desktop-ka.
Xulo faylka PST ee Muuqaalkaaga kombiyuutarka kumbuyuutarka, maadaama faylka PST asalka ah la dayactirayo.
Deji wax soo saarka go'an magaca faylka PST haddii loo baahdo.
Dayactir ilaha Muuqaalka PST. DataNumen Outlook Repair iskaan doonaa oo soo ceshan doonaa emayllada iyo waxyaabaha kale lost inta lagu gudajiro wada shaqeynta ka dhaxeysa taleefankaaga gacanta iyo kombiyuutarka kumbuyuutarka.
Nidaamka dayactirka ka dib, waxaad isticmaali kartaa Muuqaalka si aad u furto faylka PST ee go'an oo aad u hesho dhammaan lost emayllada iyo waxyaabaha kaleba waxaa lagu soo celiyey meelihii ay markii hore ka yimaadeen.
Haddii aadan ka heli karin alaabta meelaha ay ku keydsan yihiin, markaa waxaad isku dayi kartaa inaad ku hesho hababka soo socda:
1.1 Ka hel iyaga faylasha "Recovered_Groupxxx" Lost walxaha waxaa loola dhaqmi karaa sidii lost & alaabada la helay, oo la soo helay lana galiyay fayl loo yaqaan "Recovered_Groupxxx" oo ku jirta faylka PST ee go'an.
1.2 Haddii aad taqaanid qaar ka mid ah waxyaalaha la doonayo, tusaale ahaan, mawduuca emaylka, ereyada muhiimka ah ee ku jira jirka emaylka, iwm, markaa waxaad u qaadan kartaa guryahaan sidii shardi baarista, oo aad u adeegsan kartaa hawsha raadinta Muuqaalka si aad u raadiso waxyaabaha doonayay faylka PST oo go'an oo dhan. Mararka qaarkood, lost walxaha waa la soo ceshan karaa waxaana lagu ridi karaa galka kale ama galka arbitaaladarary magacyo. Iyada oo hawsha raadinta Muuqaalka, aad si fudud iyaga ka heli kartaa.
Waxaad ku arkeysaa waxyaabo nuqul aan nuqul lahayn oo kujira faylalka "Recovered_Groupxxx" Fadlan iska dhaaf iyaga. Sababtoo ah marka Muuqaalka Muuqaalka uu kaydiyo shay, waxay si nuqul ah u samayn kartaa nuqullo nuqul ah. DataNumen Outlook Repair waa mid aad u awood badan oo ay dib u soo ceshan karto nuquladan aan caadiga ahayn sidoo kalena ula dhaqmi karto sidii lost & alaabada la helay, oo la soo helay lana galiyay fayl loo yaqaan "Recovered_Groupxxx" oo ku jirta faylka PST ee go'an.